Ugbo ala akuku ugbo ala China Manufacturer
Nkọwa:Kpụ ọkụ n'ọnụ Car Seat Covers,Ụgbọ ala na-ekpo ọkụ,Ebe ụgbọala dị ọkụ
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ebe a na-ekpocha ụlọ > Ugbo ala akuku ugbo ala
Malite ụzọ ndụ gị nke kpo oku na otu nzọụkwụ !
Igwe ihe nkiri ikpo ọkụ infrared:
Site na nka na uzu ohuru nke oma na-acho uzo di iche iche (PTC), o bu nduzi onwe ya, o di mma ma zoputa ya.
Site na ụlọ ọrụ radieshon nke dị ala, a na-eji okpukpu ụgbọ ala mee ihe dị ka ọgwụ ọkụ maka nlekọta ahụike ma nye gị ahụ ọkụ mgbe ị na-akwọ ụgbọala.
Mmiri na-egbukepụ egbukepụ nke dị na nke anyanwụ na-egbuke egbuke, nwere ike ịbanye n'ime anụ ahụ mmadụ ma hapụ ume, na-enyere aka na-enweta ihe ndị na-emepụta ọgwụ na ihe oriri na ahụ anyị.
kpo oku maka oku na-esi ísì ísì ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Igwe ọkụ ọkụ eletrik maka ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ mmanụ Kpọtụrụ ugbu a
Kpụ ọkụ n'ọnụ Car Seat Covers Ụgbọ ala na-ekpo ọkụ Ebe ụgbọala dị ọkụ Kpụ ọkụ n'ọnụ Nkịta Mat Kpụ ọkụ n'ọnụ ụgbọala moto 3.7v 4500mah kpụ ọkụ n'ọnụ Gloves Nkume a kpụ ọkụ n'ọnụ maka Ubu Mgbochi kpụ ọkụ n'ọnụ maka Enyemaka Mgbu